३६ वर्षका बेहुला–८२ वर्षकी बेहुलीको,जीवनबारे थाहा पाँउदा जिब्रो टो’क्नु हुनेछ ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/३६ वर्षका बेहुला–८२ वर्षकी बेहुलीको,जीवनबारे थाहा पाँउदा जिब्रो टो’क्नु हुनेछ !
एक ३६ वर्षीय पुरुषले ८१ वर्षीया वृद्धासँग बिहे गरेर सबैलाई हैरान बनाएका छन् । ८१ वर्षीया आइरिस जोन्स र ३६ वर्षीय मोहम्मद इब्राहिमको प्रेम चर्चा चुलिएको छ । यो बेलायती जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएको छ । उनीहरुको जोडी एक अन्तर्वार्ताका लागि पहिलो पटक सँगै ब्रिटिश च्यानल आईटीभीको स्टुडियोमा पुगेको हो । च्यानलको चर्चित शो ‘दिस मर्निङ’ मा दुवैले उमेरको अन्तर र यौन जीवनका बारेमा भएको आलोचनाका सम्बन्धमा धेरै रोचक खुलासा गरेका थिए ।
इजिप्टका मोहम्मद नोभेम्बरअघि आफ्नी श्रीमती आइरिसबाट अलग बस्दै आएका थिए । तर जब मोहम्मदले भिसा पाए र आइरिसलाई भेट्न ढिला गरेनन् । आइरिसले लकडाउन र भिसा नपाएका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । आइरिसले भनिन्, ‘हामीलाई यसरी बाँच्न गाह्रो थियो । फोनमा कुरा गर्दा वा शुभ प्रभात, शुभरात्री सन्देशमा बोल्दा निकै झ्याउ भइसकेको थियो ।
ऊ कहिले आउला भनेर सोचिरहेकी थिएँ ।’ श्रीमानले बेलायत आउन भिसा पाएको थाहा पाएपछि आफ्नो आँखाबाट आँसु बग्न थालेको आइरिसले बताइन् । उनले भनिन्, ‘म टेस्कोमा थिएँ, घरका लागि फलफूल र तरकारी किन्दै थिएँ । त्यतिबेला मलाई यो कुरा थाहा भयो । मेरा आँखाबाट आँसु झरे । मैले आफ्नो आँसु थाम्न सकिन् ।’
त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित एक जनाले सोधे, ‘तपाई सन्चै हुनुहुन्छ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘हो, म धेरै खुसी छु ।’ सोही क्रममा मोहम्मदले भने, ‘म हावामा उडिरहेको छु जस्तो लाग्यो । बेलायत जाने कुरा थाहा पाएपछि सडकमा चर्को स्वरमा चिच्याउन थालेँ । कतिपयले मलाई पागल ठाने । अन्ततः म मेरी श्रीमतीलाई भेट्नतर्फ लागेँ ।’ मोहम्मद बेलायतमा अवतरण गर्नेबित्तिकै विमानस्थलमा दुवैले एकअर्कालाई पहिलोपटक भेटे ।
मोहम्मद र आइरिसको उमेरमा करिब ४५ वर्षको अन्तर छ । यो जोडीले आफ्नो उमेर अन्तरको प्रेमलाई लिएर धेरै आलोचना खेप्नु परेको छ । यसबारेमा मोहम्मदले मानिसहरुले दिने प्रतिक्रिया र आलोचनाका कारण आफूलाई निकै दबाब महसुस भएको बताए । उदाहरणका लागि, केही व्यक्तिहरूले आइरिससँग भएको उनको सम्बन्धलाई कुनै खास उद्देश्यका लागि भएको भन्छन् ।
उनले भने, ‘म बुझाउन सक्दिँन, तर हामी धेरै दबाबमा छौं । म बुझाउन सक्दिँन, आखिर केही मानिसहरूले हामीलाई किन आ’क्र’मण गर्छन् ? म काम गर्दै छु । मसँग व्यवसाय छ । म केही लाभ लिनका लागि आइरिससँग छैन । म आफैंमा धनी मान्छे हुँ । कायरो (इजिप्टको राजधानी) मा मेरो आफ्नै बंगला पनि छ ।’ श्रीमानका पक्षमा बोल्दै आइरिसले घृणा गर्नेहरुको बारेमा भनेकी छिन्, ‘प्रेमले सबैलाई जित्छ ।’ उनले मोहम्मद एकदमै सफा सुघर गर्ने व्यक्ति भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उनले अहिलेसम्म घरको भुइँमा केही खसालेका छैनन् । उनले मलाई चिया पनि दिन्छन् । अब हामी दुबैले हाम्रो पहिलो क्रिसमस सँगै मनाउने योजना बनाएका छौं ।’
आइरिसका अनुसार उनलाई अझै थाहा छैन, उनको छोरा, साथी वा कुनै आफन्तले उनलाई निम्तो दिन्छन् कि दिदैँनन् । उनले भनिन्, ‘उनीहरू सोच्न सक्छन् कि यो क्रिसमस हामी सँगै मनाउन चाहन्छौं ।’ मोहम्मदले सँधै आइरिससँग रहने योजनामा ​​छन् । आइरिस मोहम्मदसँगको यौ’न जीवनमा खुसी देखिन्छिन् । आइरिसले पनि प्रेम निर्माणलाई आफ्नो सम्बन्धको महत्वपूर्ण अंग मान्छिन् ।
आइरिस भन्छिन्, ‘मलाई त्यस्तो महसुस नभए पनि मोहम्मद सधैं मलाई सुन्दर भन्छन् । कहिलेकाहीँ हामी एकअर्कालाई मायाले अँगालो हाल्छौं ।’ आइरिस थप्दै भन्छिन्, ‘मोहम्मद अहिले निकै चर्चित भइसकेका छन् । ब्रिस्टलका एक ट्याक्सी चालकले हामीलाई देखेर चिने । जब कसैले मलाई सोध्छ, तिमीले माया कसरी पायौँ ? म यति मात्र भन्छु कि तिमी मायालाई नहेर, मायाले तिमीलाई आफै भेट्टाउनेछ ।’
आइरिसले यसअघि पनि मोहम्मदले पैसाका लागि उनीसँग विवाह गरेको कुरा अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘मलाई थाहा छ मान्छेहरु सोच्छन् कि म एक वृद्ध महिला हुँ, उसले (मोहम्मद ) ले मेरो फाइदा उठाइरहेको छ । तर म त्यति धनी छैन । म कसैले मूर्ख बनाउन सक्ने महिला पनि होइन । उसले मसँग कहिल्यै पैसा मागेन । हामी पनि ५०÷५० खर्च साझा गर्छौं । भिसा पाएपछि उसले मलाई छोडेर जाने डर छैन । म उमाथि मेरो जीवनमा पूर्ण भरोसा गर्छु ।’
पाल्पाको अमरनारायण मन्दिरमा १०८ गौमुखी धारा र शिवलिङ्ग स्थापना हुने
आज बिहिबार भगवान बिष्णु को पुजा सङै दिन को सुरुवात गर्नुस् राम्रो हुनेछ…